परमेश्‍वरले अब्राहामलाई इसहाकको बलिदान चढाउन आज्ञा दिनुहुन्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अब्राहामलाई एउटा छोरो दिनुभएपछि, परमेश्‍वरले अब्राहामलाई भन्नुभएको वचन पूरा भयो। यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्‍वरको योजना यहाँ रोकियो; यसको विपरीत, मानवजातिको व्यवस्थापन र मुक्तिको लागि परमेश्‍वरको भव्य योजना भर्खरै मात्र सुरु भएको थियो र उहाँले अब्राहामलाई एउटा छोरा दिएर दिनुभएको आशिष् उहाँको समग्र व्यवस्थापन योजनाका लागि एक प्रस्तावना मात्र थियो। अब्राहामले इसहाकलाई बलि चढाउने बित्तिकै शैतानसित परमेश्‍वरको लडाइँ चुपचाप सुरु भइसकेको थियो भनेर कसलाई थाहा थियो?
मानिस मूर्ख छ कि छैन सो परमेश्‍वरले वास्ता गर्नुहुन्न—उहाँले केवल मानिस साँचो होस् भनेर मात्र भन्नुहुन्छ
यसपछि, हामी परमेश्‍वरले अब्राहामलाई के गर्नुभयो सो हेरौं। उत्पत्ति २२:२ मा, परमेश्‍वरले अब्राहामलाई निम्‍न आज्ञा दिनुभयो: “अब आफ्नो छोरो, तैँले माया गर्ने तेरो एकमात्र छोरो इसहाकलाई साथमा लिएर मोरीयाहको देशमा जा; अनि मैले तँलाई पर्वतहरूमध्ये जुन पर्वतमा जा भन्‍नेछु त्यसलाई त्यहाँ होमबलि चढा।” परमेश्‍वरले भन्‍नुभएको वचनको अर्थ स्पष्ट थियो: उहाँले अब्राहामलाई तिनको एक मात्र छोरो इसहाकलाई होमबलिको रूपमा दिनू भनेर भन्नुभएको थियो, जसलाई तिनले प्रेम गरेका थिए। आज यसलाई हेर्दा, के परमेश्‍वरको आज्ञा अझै पनि मानव धारणासँग नमिल्दो छ? छ! त्यति बेला परमेश्‍वरले गर्नुभएका सबै कुरा मानिसको धारणाको विरुद्ध छ। यो मानिसका निम्ति बुझ्न नसकिने कुरा हो। तिनीहरूको धारणामा, मानिसहरू निम्न कुरामा विश्‍वास गर्छन्: जब मानिसले विश्‍वास गरेन, र यसलाई असम्भव ठान्यो, तब परमेश्‍वरले तिनलाई एउटा छोरो दिनुभयो, र तिनले एउटा छोरा जन्माएपछि, परमेश्‍वरले तिनलाई आफ्नो छोराको बलि चढाउनू भन्नुभयो। के यो पूर्ण रूपमा अविश्‍वसनीय छैन र! परमेश्‍वरले वास्तवमा के गर्ने योजना गर्नुभयो? परमेश्‍वरको वास्तविक अभिप्राय के थियो? उहाँले विनासर्त अब्राहामलाई एउटा छोरा दिनुभयो, तर उहाँले अब्राहामलाई पनि विनासर्त बलि चढाउनू भन्नुभयो। के यो अति थियो? तेस्रो पक्षको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो केवल अति मात्र होइन तर केही हदसम्म “विनाकारण समस्या उत्पन्न गर्ने” मामला पनि थियो। तर परमेश्‍वरले अति धेरै कुरा माग्दैहुनुहुन्छ भन्‍ने अब्राहाम आफैले विश्‍वास गरेनन्। यसबारे तिनको आफ्नै केही थोरै धारणाहरू थिए र तिनले परमेश्‍वरलाई केही शङ्का गरेको भए पनि, तिनी अझै पनि बलि चढाउन तयार भए। यस स्थितिमा, अब्राहाम आफ्नो छोराको बलि चढाउन तयार थिए भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्ने के कुरा देख्छस्? यी वाक्यहरूमा के भनिएको छ? मूल पाठले निम्न विवरणहरू दिन्छ: “अनि अब्राहाम बिहान सबेरै उठे र आफ्नो गधामा काठी कसे र आफूसँग आफ्ना जवान मानिसहरूमध्ये दुई जना र आफ्नो छोरो इसहाकलाई लिए, अनि होमबलिको निम्ति दाउरा चिरे र उठेर परमेश्‍वरले तिनलाई भन्‍नुभएको ठाउँमा गए” (उत्पत्ति २२:३)। “अनि तिनीहरू परमेश्‍वरले तिनलाई भन्‍नुभएको ठाउँमा आए; अनि अब्राहामले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए अनि दाउरा मिलाएर राखे र आफ्नो छोरो इसहाकलाई बाँधे अनि उसलाई वेदीमा दाउरामाथि राखे। अनि अब्राहामले आफ्नो हात तन्काए अनि आफ्नो छोरोलाई मार्न छुरी लिए” (उत्पत्ति २२:९-१०)। जब अब्राहामले आफ्नो छोरोलाई मार्न हात बढाएर हतियार उठाए, के परमेश्‍वरले तिनका कार्यहरू देख्नुभयो? उहाँले देख्नुभयो। परमेश्‍वरले अब्राहामलाई तिनको छोराको बलि चढाउनू भन्नुभएदेखि अब्राहामले इसहाकलाई बलि चढाउन हतियार उठाएको सम्पूर्ण प्रक्रियाले सुरुदेखि नै परमेश्‍वरलाई अब्राहामको हृदय कस्तो छ भन्‍ने देखायो, र तिनको पहिलेको मूर्खता, अज्ञानता र परमेश्‍वरको बारेमा भुल बुझाइको बाबजुद पनि त्यसबेला अब्राहामको हृदय परमेश्‍वरप्रति साँचो र इमानदार थियो, र तिनले साँच्चै परमेश्‍वरबाट पाएको आफ्नो छोरा इसहाकलाई फेरि परमेश्‍वरलाई नै दिन लागेका थिए। परमेश्‍वरले तिनमा आज्ञापालन देख्नुभयो, त्यस्तो आज्ञापालन जुन उहाँले चाहनुहुन्थ्यो।
मानिसका निम्ति परमेश्‍वरले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ जुन बुझ्नै नसकिने र अविश्‍वसनीय पनि हुन्छ। जब परमेश्‍वरले कसैलाई योजनाबद्ध रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ, यो योजनाबद्ध कार्य प्रायः मानिसको धारणासँग मिल्दैन र उसले बुझ्न नसक्ने हुन्छ, तैपनि यो बेमेल र बुझ्न नसक्ने कुरा नै मानिसको निम्ति परमेश्‍वरको परीक्षा र जाँच हो। यसै बीच, अब्राहाम आफूभित्रै परमेश्‍वरप्रति आज्ञाकारीता प्रकट गर्न सक्षम थिए, जुन तिनी परमेश्‍वरको माग पूरा गर्न सक्षम हुनुको सबैभन्दा आधारभूत सर्त थियो। जब अब्राहामले परमेश्‍वरको माग पूरा गर्न सक्षम भएर इसहाकलाई बलि चढाए, तब मात्र परमेश्‍वर साँच्चै मानव जातिप्रति, अर्थात् उहाँले चुन्नुभएको अब्राहामप्रति सुनिश्‍चितता र स्वीकृतिको महसुस गर्नुभयो। तब मात्र परमेश्‍वर उहाँले चुन्नुभएको यो व्यक्ति अति आवश्यक अगुवा हो, जसले उहाँको प्रतिज्ञा र त्यसपछिको व्यवस्थापन योजना पूरा गर्न सक्छ भनी निश्‍चित हुनुभयो। यो एउटा परीक्षा र जाँच मात्र रहेको भए पनि, परमेश्‍वरले सन्तुष्ट महसुस गर्नुभयो, उहाँले उहाँप्रतिको मानिसको प्रेम महसुस गर्नुभयो, र मानिसद्वारा उहाँले अघि कहिल्यै अनुभव नगर्नुभएको सान्त्वना महसुस गर्नुभयो। जुन क्षण अब्राहामले इसहाकलाई मार्न छुरी उठाए, के परमेश्‍वरले तिनलाई रोक्नुभयो? परमेश्‍वरले अब्राहामलाई इसहाकको बलि चढाउन दिनुभएन, किनकि इसहाकको ज्यान लिने अभिप्राय परमेश्‍वरको थिएन। यसैले परमेश्‍वरले ठीक समयमा अब्राहामलाई रोक्नुभयो। परमेश्‍वरका लागि, अब्राहामको आज्ञाकारीता अघि नै परीक्षामा सफल भइसकेको थियो, तिनले जे गरे त्यो पर्याप्त थियो, र परमेश्‍वरले आफूले गर्न चाहनुभएको कामको नतिजा देखिसक्नुभएको थियो। के यो नतिजा परमेश्‍वरको निम्ति सन्तोषजनक थियो? यो भन्न सकिन्छ, कि यो नतिजा परमेश्‍वरको निम्ति सन्तोषजनक थियो, यो परमेश्‍वरले चाहनुभएकै कुरा थियो, र परमेश्‍वरले हेर्न चाहनुभएको कुरा यही थियो। के यो सत्य हो? विभिन्न सन्दर्भहरूमा, परमेश्‍वरले प्रत्येक व्यक्तिलाई जाँच्ने विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्नुहुने भए पनि, उहाँले अब्राहामको हृदय साँचो छ, र तिनको आज्ञाकारीता सर्तरहित छ भन्‍ने देख्नुभयो। वास्तवमा परमेश्‍वरले चाहनुभएको पनि त्यस्तै “सर्तरहित” कुरा थियो। मानिसहरू प्रायः भन्छन्, “मैले यो पहिले नै चढाइसकें,” मैले पहिले नै त्यो छोडिसकेको छु—परमेश्‍वर अझै पनि किन मसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न? उहाँले किन मलाई परीक्षाहरू गरिरहनुहुन्छ? उहाँले किन मलाई जाँच गरिरहनुहुन्छ?” यसले एउटा तथ्यलाई प्रकट गर्दछ: परमेश्‍वरले तेरो हृदय देख्नुभएको छैन, र तेरो हृदय प्राप्त गर्नुभएको छैन। भन्नुको तात्पर्य, जसरी अब्राहामले आफ्नै छोरालाई बलि चढाउनका निम्ति आफ्नै हातले हतियार उठाए उनले जुन इमानदारीता देखाए, त्यस्तो इमानदारी उहाँले तँमा देख्नुभएको छैन। उहाँले तेरो सर्तरहित आज्ञाकारीता देख्नुभएको छैन, र तँद्वारा सान्त्वना पाउनुभएको छैन। यसैले, परमेश्‍वरले तँलाई जाँचिरहनु स्वाभाविक कुरा हो। के यो सत्य होइन?
अघिल्लो: परमेश्‍वरले अब्राहामलाई एउटा सन्तान दिने प्रतिज्ञा दिनुभयो
अर्को: अब्राहामलाई परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा